Saturday April 14, 2018 - 10:52:01 in Wararka by Super Admin
Roobab Mahiigaan ah oo ay ku diirsadeen dadka iyo duunyada ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka da'ay deegaanno iyo degmooyin katirsan gobollada Jubbooyinka,galguduud iyo sh/dhexe ee Koonfurta iyo dhammaan bartamaha Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya Jubba dhexe ayaa sheegaya in roobab saacado badan qaatay ay shalay gelinkii dambe ka da’een inta badan degmooyinka Jubbada dhexe sida baadiyaha degmooyinka Bu’aale,Jilib Saakoow iyo salagle.
Inta Badan degmooyinka iyo deegaannada Gobollada Bay iyo Bakool ayay xareedda Roob ku hoortay, waraha waxaa dhax ceegaaga biyaha xareedda, degmooyinka Tayeegloow iyo Xudur oo Bakool katirsan ayaa kamid ah meelaha Roobabka Guga ka xasileen, sidoo kale degmooyinka Baydhabo,Buurhakaba iyo Ufuroow ayaa laga roobsaday.
Sidoo kale roobabku waxay ka da’een degmooyinka Mahadaay, Ceelbaraf iyo tuulooyin dhowr ah oo dhammaantood katirsan gobolka shabeelaha dhexe, sida dadka deegaanka sheegeeyeen roobabka oo biya dhigay waddooyinka ayaa ahaa bilaawga xilliga Guga oo curtay, dadka iyo duunyada ayaa ku qaboowsaday roobabka Guga oo si rasmi ah ucurtay.
Dhinaca kale Roobab saacado badan da'ayay ayaa lagasoo sheegayaa degmooyin katirsan gobolka Hiiraan, degmooyinka Buq'aqable,Ceel Cali,Mukayle iyo dhammaan deegaannada dhaca Galbeedka gobolka Hiiraan ayay xalay ka da'een roobab Mahiigaan, dhanka Bari ee Hiiraan sidoo kale Roobab Mahiigaan ah ayaa lagasoo calaamadeeyay.
Magaalooyin iyo deegaanno katirsan gobollada Sh/Hoose iyo Galguduud ayaa kamid ah meelaha roobabka Guga ay ka curteen, magaalooyinka Ceelbuur,Afgooye, Galhareeri iyo deegaanno kale ayaa roobabka lagasoo calaamadeeyay, dhanka magaalada Muqdisho iyana waxaa ka da'ay Roobab dadku ku qaboowsadeen.
Raxmadda Eebe ee ka hoortay gobollada dalka ayaa ka dhigan faraxad weyn oo soomaalida usoo gashay marka loo eego harraadkii iyo diiftii ka dhalatay jiilaalkii raagay, inta ay xooluhu ubadbaadeen ayaa helaya naq wanaagsan halka beeralaydu ay fursad uhelayaan tacabka dalagyada maxalliga ah.
Roobabka ka da’ay gobollo katirsan dalka Soomaaliya yaa kusoo aadaya xilli Kuleul saameeyay noolaha ay ka dhufteen gobollada dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya waxaana bilihii lasoo dhaafay la dareemayay Kuleyl daran.